Sheekada ugu weyn ee dhalashada, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Markii aan ku dhashay Pensacola, Isbitaalka Navy ee Florida, qofna ma ogayn inaan ku jiray booska xiisaha leh ilaa aan ka gaaro dhamaadka qaldan ee aan ku wajahan yahay takhtarka. Qiyaastii ilmo kasta oo 20-sano jira ugama seexan ilmo-galeenka waxyar kahor dhalashada. Nasiib wanaagse, jaranjarada tooska ahi micnaheedu maahan inay tahay in ilmaha la soo geliyo dunida qalliin lagu sameeyo. Isla mar ahaantaana, ma aan dhaarin kahor intaan dhalan mana jirin dhibaatooyin kale oo intaas ka badan. Dhacdadan ayaa i siisay naanaystiisa "lugaha xundhurta".
Qof kastaa wuxuu hayaa taariikhdiisa ku saabsan dhalashadooda. Carruurtu waxay jecel yihiin inay wax badan ka bartaan dhalashadooda iyo hooyooyinka oo jecel inay si faahfaahsan u sheegaan sida carruurtoodu ku dhasheen. Dhalasho waa mucjiso waxayna inta badan ilmada ku keentaa indhaha kuwa khibrada u leh.
In kasta oo dhalashada inteeda badan si dhakhso leh loogu xasuusto, waxaa jira dhalaal aan la ilaawi doonin. Dibedda, dhalashadani waxay ahayd mid caadi ah, laakiin muhiimadeeda ayaa laga dareemay adduunka oo dhan welina waxay ku leedahay saameyn dhammaan aadanaha adduunka oo dhan.
Markii Ciise dhashay, wuxuu noqday Imimaan - Ilaah baa inala jooga. Ilaa Ciise u yimid, Ilaah wuxuu inala joogi jiray si uun. Oo isagu wuxuu la jiray binu-aadmiga oo jooga tiir daruur ah maalintii, tiirkii dabka ahaana habeennimadii buu la jiray Muuse.
Laakiin dhalashadiisa sida bini-aadamka ayaa ka dhigtay inuu taabto. Dhalashadaani waxay siisay indho, dhego iyo afka. Wuu inala cunay, wuu nala hadlay, wuu na dhagaystay, wuu qoslay oo na taabtay. Wuu ooyay oo xanuun la kulmay. Isaga oo u maraya silica iyo murugadiisa, wuu fahmi lahaa silica iyo murugadeena. Isaga wuu nala jiray oo isagaa naga mid ah.
Markuu midkeen noqdo, Ciise wuxuu ka jawaabayaa cabashada weligeed ah: "Ma jiro qof i fahmaya". Waraaqa uu u diray Cibraaniyada Ciise waxaa lagu sharaxay inuu yahay wadaad sare oo noo naxiya oo na fahansada maxaa yeelay isaga waxaa la inoogu soo dejiyey isla sidii oo kale. Tarjumidda hiliblaha ayaa sidan u dhigaysa: «Maaddaama aynu haysanno wadaad weyn oo weyn, Ciise, oo ah Wiilka Ilaah ee samooyinka sii dhex maray, aynu qirashadeenna xajinno. Maxaa yeelay, innagu ma lihin wadaad sare oo aan u adkaysan kari kari weynay tabarkeenna, laakiin waa kan wax walba lagu tijaabiyey sida innagoo kale, laakiin dembi la'aan. (Cibraaniyada 4,14: 15).
Waa aragti ballaadhan oo khiyaano leh oo ku saabsan in Ilaah ku nool yahay munaarad faan-maroodi ah oo jannada noo deggan oo aad nooga fog. Taasi run ma ahan, Wiilka Ilaah wuxuu noo yimid isagoo midkeen ah. Ilaah baa inala jira wali. Markii Ciise dhintay, waan dhintay, oo markuu sara kacayna, annaguna waan la sara joognay isaga.
Dhalashada Ciise waxay ka badneyd sheekada dhalashada ee qof kale oo ku dhashay adduunkan. Waxay ahayd jidkii gaarka ahaa ee Eebbe inuu na tuso sida uu isagu noo jecel yahay.